के तपाँईलाई पनि छिन-छिनमा पिसाब लाग्ने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्ता घा, तक रोगको संकेत – Ap Nepal
October 3, 2021 281
कहिले काही पटक-पटक पिसाब लाग्छ। यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन। सामान्यतः धेरै पानी वा तरल पदार्थ पिएको बेला पिसाब लाग्छ, जो स्वभाविक हो।
दिनमा कति पटक पिसाब आउनु पर्छ ? एक दिनमा कति पटक पिसाब फेरिन्छ ? त्यसले हाम्रो स्वस्थ्यबारे बताउँछ । सामान्यत एक दिनमा चारदेखि १० पटकसम्म पिसाब लाग्नु सामान्य हो । औसात व्यक्तिको मुत्राशयमा जति पिसाब जम्मा हुन्छ, त्यसलाई तीनदेखि पाँच घण्टासम्म अवधी रोक्न सकिन्छ।
कुन अवस्थामा खतरानाक ? यदि पिसाब गरेको समयमा जलन वा दुखाई महसुष हुन्छ भने यो चिन्ताको विषय हो। यदि सामान्य अवस्थामा पनि पटक–पटक पिसाब लाग्छ भने, त्यो समस्या हो। यसरी पटक-पटक पिसाब लाग्नु गंभिर समस्या पनि हुनसक्छ।
राती कति पटक पिसाब आउनु उचित ? खासगरी रातको समयमा पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने त्यसलालाई गंभिरतापूर्वक लिनैपर्छ । राती निन्द्रा बिथोल्नेगरी पिसाब आइरहनुले विभिन्न समस्याको संकेत गर्छ। राती एक वा दुई पटकसम्म पिसाब फेर्न उठ्नु सामान्य हो। यद्यपी पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने त्यसको उपचार खोज्नैपर्छ। यद्यपी बुढ्यौली उमेरमा छिटो छिटो पिसाब लाग्नु सामान्य हो।
कुन अवस्थामा चिकित्सककहाँ जानुपर्छ ? पिसाब गर्ने समयमा अचानक परिवर्तन भयो भने चिकित्सकको परामर्श आवश्यक हुन्छ। कहिले कहिं अधिक तरल पदार्थ सेवनले पनि पिसाब लाग्न सक्छ । तर, पटक पटक त्यो क्रम दोहोरिएमा चिकित्सकलाई भेट्नैपर्छ।
के हुनसक्छ ? पटक पटक पिसाब आउनुको कारण मुत्रनली वा मुत्राशयको संक्रमण हुनसक्छ। त्यस्तै मृगौलाको कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा पनि पिसाब रोकिदैन, पटक पटक आइरहन्छ।
के छ उपचार विधी ? जटिल अवस्थामा चिकित्सकको परामर्श लिनैपर्छ । यद्यपी यी समस्याको निदान घरेलु विधीबाट पनि खोज्न सकिन्छ। पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ, जसले संक्रमण छ भने पिसाबको माध्यामबाट हटाउन सकिन्छ। दही, पालक, तिल, अलसी, मेथीको सब्जी दिनहुँ प्रयोग गरौ।
सुख्खा अमला पिसेर चूर्ण बनाउने । त्यसमा सख्खर मिसाएर सेवन गर्नुपर्छ । भिटामिन सिले भरपुर खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ।अनारको बोक्रा सुकाउने र त्यसलाई पिसेर चुर्ण बनाउने। बिहान बेलुका यो चुर्ण पानीसँग सेवन गरौ। अंगुरको जुस, गाजर, अंकुरित गेडागुडी पनि फाइदाजनक हुनसक्छ।-ज्ञानगुनकाकुराबाट।
Prev”बिहानै लेखेका थिए यस्तो स्ट्याटस”- अल्पआयूमै अस्तायो एउटा ‘चम्किलो तारा’,…
Next”कुरा बुझ्न पर्छ” पछी प्रकाश सपुतले ल्याए “दशै-तिहार अर्को साल” भिडियो सहित
अस्ट्रेलियामा नेपाली युवा-युवती भन्छन, ‘लिभिङ टु’ गेदर धेरै राम्रो हुँदोरै छ ‘ (भिडियो सहित )
दुवईमा एक युवालाई म,र्नु बाच्नुको अवस्थामा, एजेन्टलाई कुरा राख्दा उल्टै ध,म्कि दिए,फोनमा पर्यो ल,फडा (भिडियो सहित)